खोइ कहाँ ल्याए समावजाद ?::mirmireonline.com
कुलबहादुर गुरुङ नेपाली राजनीतिमा चिनाउने पर्ने नाम होइन। शिक्षण पेसा हुँदै लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय नेता गुरुङ नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्रीसमेत हुन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुई सय ४० बर्से राजतन्त्र अन्त्यसहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्ने व्यक्ति पनि हुन् उनी। २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभा बैठकमा जेष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका उनै गुरुङसँग गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्ष प्रवेशको अवसरमा नागरिकका लागि बालकृष्ण अधिकारी र वसन्त खड्काले नागरिकका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश हामिले यहाँ साभार गरेका छौ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष भयो, तपाईकै अध्यक्षतामा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो, त्यो सम्झिँदा कस्तो अनुभूत हुन्छ ?
प्रक्रिया पूरा नगरी हतारहतारमा गणतन्त्र घोषणा भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
गणतन्त्र १२ औं वर्षमा पुग्दैगर्दा तपाईंले एउटा नागरिकका रूपमा हेर्दा केके हुनुपथ्र्याे, के के हुन सकेन ?